Sida loo badalo AVCHD in MOV files
MOV waa noqon qaabka default ciyaaryahan QuickTime ee Mac iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ay tahay qaabka ugu fiican taas oo ka dhigaysa hubiyo in aan gobolka kaliya ee adeegyada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa si ku isticmaala, laakiin waxay Waxa kale oo aad u hesho sida ugu fiican iyo noocyada ugu boosaska badan oo qaabab taasoo loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo farsamooyinka ugu cabsi badan ee abid lagu horumariyo by Apple.
Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo AVCHD in MOV?
Qeybta 2: Sida loo badalo AVCHD in MOV si degdeg ah oo tayo sameecadda
Qeybta 3: AVCHD Free in Converter MOV
Qeybta 4: AVCHD Online in Converter MOV
Part1: Waa maxay sababta loogu badalo AVCHD in MOV on Mac?
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo qaab MOV la fadilay AVCHD ama qaab kale oo adduunka ah oo aan sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in faa'iidooyinka waxaa lagu hayaa maskaxda ku sameeyo ka hor inta qaab kasta oo diinta ku Mac. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in faa'iidooyinka qaab MOV waxaa marka hore loo arko ka hor habka horumarka si loo xaqiijiyo in sida ugu fiican ee la siiyo nidaamka iyo arrinta guud ayaa sidoo kale waxaa lagu xalin. Sababaha ugu caamsan si loogu badalo AVCHD in ay MOV waa in user ka heli kartaa qaab ah in nuur yahay, oo qaadataa meel yar arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ma aha oo kaliya heli doonaa faahfaahinta ugu fiican lakiin sidoo kale dhamaan heli doonaa natiijada ugu wanaagsan wax waqti ah gudahood. Labada sababood ee loogu talagalay taas oo qaab ah waxaa loo baddalaa ayaa lagu sharaxayaa sida hoos si loo hubiyo in user helo faahfaahinta ugu fiican iyo terminologies la xiriira ayaa sidoo kale lagu yiri:
MOV waa mid ka mid ah kuwa qaabab kuwaas oo hubiyo in user helo barnaamij aan gobolka kaliya ee farshaxanka, laakiin user sidoo kale uu helo adeegyada ugu fiican ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab MOV ayaa loo arkaa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo qaabab ugu boosaska badan ee jeer oo dhan iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in OS kale iyo madallo kale oo ay sidoo kale socdaan jihada this qaab si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa arrintan la xiriira.
Barnaamijyada qalab software iyo terminologies kale ee la xidhiidha tusaale ahaan ciyaaryahanka QuickTime waa kuwa ugu fiican oo ay sidoo kale oo lacag la'aan ah si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira iyo sidoo kale ay ka helaan natiijo ka fiican oo waafaqsan shuruudaha. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka taageera qaab MOV waxaa si dhab ah loo arkaa barnaamijka ugu wanaagsan ee jeer oo dhan sida u hubiyaa in user helo Apple Inc. qalab taageeray in la soo saaro in natiijada ugu wanaagsan u hesho waqti lahayn gudahood at dhan.
Marka ay timaado qaab MOV markaas waxa ay tahay in la xuso in qaabka ay leedahay faaidooyin oo hubiyo in user helo ugu fiican iyo noocyada ugu boosaska badan oo qaabab taasoo u fududaynaysa iyaga si aad u hesho arrin guud xaliyaa gudaha lahayn waqtiga oo dhan.
Part2: Sida loo badalo AVCHD in MOV si degdeg ah oo tayo sameecadda
Tani waxay qayb ka mid ah tutorial la xaqiiqda ah samayn doonaa in sida user ah u bedeli karaan video AVCHD ah in qaab MOV la isticmaalayo Wondershare Video Converter Ultimate oo waa barnaamij loo sameeyay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo saamiga guud ee diinta khaladaad la yareeyo si weyn u kordhin. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in arrinta s xalin wax waqti ah gudahood oo dhan iyo convertor helo natiijada ugu wanaagsan dadka isticmaala mar ma gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user helo adeegyada ugu horumarsan ugu wanaagsan iyo wakhti ku jirin innaba gudahood ah si loo hubiyo in convertor loo isticmaalo aawadood fudayd isticmaala oo ku qanacsan. Faahfaahinta ee geeddi-socodka lagu Xusi hoos ku qoran:
1. Download iyo rakibi barnaamijka halkan, ayaa badhanka dar files waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso in faylasha lagu darin interface ugu weyn ee barnaamijka:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in fallaadhiina waxay ka double waxaa riixi si ay u hubiyaan in qaab la doonayo waxaa la soo xulay oo user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira:
3. button diinta ayaa markaas waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka halkan ku dhamaato:
Waxaa sidoo kale in la xuso in user inta la isticmaalayo qaab taas oo ka dhigaysa hubiyo in nidaamka Mac waxaa si buuxda looga faa'iideysan iyo marka ay timaado ay caanka ah ee qaabka markaas waa in la ogaadaa in OS kale ayaa sidoo kale horumarinta qalabka iyo farsamada si ay u hubiyaan in qaab aan la taageeray oo keliya, laakiin sidoo kale waxa uu helo taageero ugu fiican. Qaab MOV ayaa la soo saaray iyadoo Inc Apple si loo hubiyo in riyadii qabo qaab default u user a run si ay natiijada in ay yihiin state of farshaxanka iyo ciyaaraha ee videos iyo xitaa sawirada heli kartaa ma aha arrin at dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ka heli kartaa ugu fiican isbedel qaab waqtiga ma gudahood oo dhan iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in MOV waa qaab fudud oo keliya ma aha inuu xaqiijiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta in la bedelo qaabka laakiin qalab in la keeni doono in tutorial this sidoo kale hubin doona in user helo xaq ugu fiican ee suuqa oo ma aha in ay baadhaan waxay muddo ka badan internet-ka. Faahfaahinta dhamaystiran waxaa la siin doonaa iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user helo xiriirka download sidoo si loo hubiyo in hannaanka uu noqonayaa abid fudud.
Wondershare Free video Converter waa dhammaystiran oo lacag la'aan ah oo si sahlan loo isticmaali video Converter. Waxaa loogu badalo karaa in tiro ka mid ah audio iyo video qaabab, iyaga la jaan qaada dhammaan qalabka oo tayo weyn leh. Muuqaaladan muhiim ah oo qalab this waa sida soo socota:
Saciira Speed ​​Conversion Fast
Waxay ka dhigaysa isticmaalka buuxa oo ka mid ah farsamooyinka cusub NVDIA CUDA iyo AMD, oo multi-muhiimka ah processor ay taageerayaan si loogu badalo 30x dhakhso.
Xoog ayeey Video
Dallaga baararka madow, jar ka soo qayb aan la rabin, midowdo dhowr clips ka mid ah, shakhsiyeeyo aad video la saamaynta gaar ah
In-barnaamijka raadinta iyo soo bixi online videos ka YouTube.
Haddii aad dareensan tahay in aanad software wax on your computer, waxaad isku dayi kartaa this Converter online halkii.
> Resource > Beddelaan > Sida loo badalo AVCHD in MOV